Pot lasibatry - China Ningbo Sine
Ny vilany maharitra lasibatry (andriamby vilany na andriamby vilany) hametraka ferromagnetic zavatra haingana sy mora foana ao amin'ny toerana ilaina. andriamby ireo rafitra manana afa-tsy iray manintona eny amin'ny andriamby. Amin'ny teny hafa, ny hafa rehetra dia tsy lafiny andriamby. Io endriky ny fanorenana mametra ny niely bebe kokoa ny sahan'andriambin'ny tany. Ho vokany, na ny zavatra hafa ao amin'ny faritra milina etỳ amin'ny manodidina ny vilany andriamby aza magnetised. Vilany avoakan'ireo andriamby, mitana ny andriamby hery mandrakizay. Mitombo ihany ny hafanana sy ny ivelany dia afaka hampihena andriamby saha hery ny andriamby. Vilany lasibatry (andriamby vilany na andriamby vilany) matanjaka avoakan'ireo andriamby, izay nitombo ho an'ny indostria amin'izao fotoana ilaina. andriamby vilany dia voaforon'ny ny avoakan'ireo andriamby, toy ny NdFeB, SmCo, AlNiCo, mafy ferrite, plastika, fingotra sy ny singa hafa. Ireo lasibatry (andriamby vilany na andriamby vilany) dia afaka mamokatra ny andriamby eo amin'ny saha ambonin'ny manokana. Arakaraka ny fampiasana, vilany lasibatry (andriamby vilany na andriamby vilany) dia tsy mitovy ny habeny, endriny sy ny sakany. Isan-karazany ny vilany avoakan'ireo andriamby, asa samihafa mari-pana. Na izany aza dia manome vokatra mitovy amin'ny mari-pana amin'ny ara-dalàna.
Ireo avoakan'ireo andriamby, ireo zavatra maro avoakan'ireo andriamby, izay natao ho an'ny indostria isan-karazany fampiharana. Ny malaza indostria izay avoakan'ireo andriamby, ireo no ampiasaina dia toy izao manaraka izao:
- Ny metaly sy ny vy orinasa.
- Fitaovana fivarotana.
- Ampiasaina hametraka ferrous-andriamby farantsa asa.
Open sy Download vokatra catalogue ny andriamby vilany
Previous: nankahery ny avoakan'ireo andriamby,
Manaraka: Andriamby Name Tags